သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော… စစ်အစိုးရ၀န်ထမ်း သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော… စစ်အစိုးရ၀န်ထမ်း သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့
သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော… စစ်အစိုးရ၀န်ထမ်း သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့
Posted by ကိုပါကြီး on Dec 18, 2011 in Copy/Paste |5comments
ခုတလော မြန်မာတပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေ ဟောနေတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို အရေးယူပေးဖို့ စစ်အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်တဲ့ သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က အမိန့်စာတွေ ထုတ်နေတာတွေကို တွေ့ရလို့ သူတို့အစား ရှက်မိပါတယ်။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်က ဖယ်ရှားရန် အမိန့်စာတွေ ထုတ်ရအောင် ရွှေည၀ါဆရာတော်က ဘယ်လို ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေလို့လဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောတာ၊ သူ့ကျောင်းမှာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ အလှူအတန်း အခမ်းအနားတွေ လုပ်တာ၊ အကျဉ်းကျသံဃာတွေ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လွတ်ဖို့ ဆုတောင်းပွဲတွေ လုပ်တာ ဘယ်သူတွေကို ထိခိုက်နေလို့လဲ။
သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်တွေ ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး အာဏာပိုင်တွေ အလိုကျ ကိုယ့်သံဃာအချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်နေတာ အင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးသားအချင်းချင်း သတ်တာ ဖြတ်တာတွေ ရပ်ဖို့ အတူတကွ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်အောင် အတူတကွ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တရားဟောတာ မကောင်းဘူးလား။
မြတ်စွာဘုရား သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကတောင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေ ဟောခဲ့လို့ လူအသက်ပေါင်းများစွာ ချမ်းသာရခဲ့တာ ပိဋကတ်စာပေတွေမှာ အထင်အရှား ရှိနေသေးတာကို ဆရာတော်တို့ မေ့နေပြီလား။
ခုလို ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်တွေအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကို တခွန်းတပါဒမှ ဆုံးမသြ၀ါဒမပေးဘဲ စစ်အစိုးရအလိုကျ လုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ အင်မတန်မှ တာဝန်မကျေပြွန်ရာရောက်သလို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်။
အစိုးရကိုယ်တိုင်တောင် ပြည်တွင်းစစ်တွေ ရပ်စဲဖို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆွေးနွေးနေတာ အားလုံးအသိပါ။ တဘက်တလမ်းကနေ ရွှေည၀ါဆရာတော်က ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေ ဟောနေတာ အစိုးရကိုတောင် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသေးတယ်။ သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်တွေ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ရွှေည၀ါကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပညာသီဟအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ စာမှာ ဆရာတော်အနေဖြင့် မန္တလေးမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် တရားဟောကြားသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀-၁၁-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် သံဃာ့နာယက ၄၇ ပါး စုံညီအစည်းအဝေးမှ ဆရာတော်အား ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန်၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မနာခံသဖြင့် ဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်နှင့် ရွှေည၀ါကျောင်းတိုက်အတွင်း မည်သည့်သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရန် ဆိုသည့် အချက်သုံးချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
မန္တလေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ တရားဟောတာ အပြစ်လား။ ပင့်ဖိတ်တဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေရှိရင် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမဆို တရားဟောရမှာ ဘုန်းကြီးတွေ အလုပ်မဟုတ်ဘူးလား။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဖိတ်ရင်လည်း ဆရာတော်က ဟောမှာပါ။ အစိုးရရယ် အတိုက်အခံရယ်လို့ ဆရာတော်က ခွဲခြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ တရားဟောတာနဲ့ပဲ ကျောင်းတိုက်က ဖယ်ရှားပေးရမယ်၊ ဒုဗ္ဗဇပုဂ္ဂိုလ် (ဆိုဆုံးမရခက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်) ဖြစ်တယ်၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာသဖြင့် ဆိုတာတွေဟာ အတော်လေး သဘာဝမကျတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သံဃာ့နာယက ဆရာတော်တွေကို တခုလောက် လျှောက်ထားချင်ပါတယ်။ ဆရာတော်တို့ အနေနဲ့ကရော သာသာနာရေးကိစ္စတွေမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဘုရားဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လား။ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး သံဃာတော်တွေကို ဖိနှိပ်နေတာတွေကို တခွန်းတပါဒ ဟန့်တာဖူးပါသလား။ သံဃာတော်တွေက ရေးဘေး၊ မီးဘေး ပညာရေးကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး လူထုကို အကူအညီတွေ ပေးတယ်။ အဲဒီသံဃာတွေကို ဖမ်းတယ်။ ထောင်ချတယ်။
ဒီလို မတရားလုပ်နေတာတွေကိုကျတော့ စစ်အစိုးရကို တခွန်းတပါဒမှ ပြောဖော်မရဘဲ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သံဃာတွေကိုိတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ အလိုကျ အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ပြီး ပိတ်ပင်တားဆီးနေတာတွေဟာ တရားရဲ့လား။ သံဃာ့နာယက ဆရာတော်တွေ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ ကြီးပွားတိုးတက်အောင် ငြိမ်းချမ်းအောင် ဘာတခုမှ မလုပ်ဆောင်ဘဲ စစ်အစိုးရ အလိုကျ သံဃာတွေကို ဖိနှိပ်နေတာတွေဟာ တကယ့်ကို အဂတိတရား လိုက်စားနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လျှောက်ထားချင်တာကတော့ စစ်အစိုးရ အလိုကျ စစ်အစိုးရ ခိုင်းတာတွေ လုပ်ဖို့ သံဃာ့နာယက ဖွဲ့စည်းထားတာလား။ ဘာအတွက် သံဃာ့နာယကကို ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဆိုတာ ဆရာတော်တို့ အနေနဲ့ သေချာစဉ်းစားပြီး မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာတွေကို မလုပ်ဖို့ လျှောက်ထားလိုပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဘုရားမျက်နှာတော်ကို မကြည့်ဘဲ စစ်အစိုးရ ခိုင်းတိုင်း လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။
(အရှင်ပညာနန္ဒ ဒီဇင်ဘာ-၁၅-၂၀၁၁ ၏ http://www.facebook.com/notes/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC/%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%82%94%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%83%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%95/209531322462766 ရှိ post ကို တဆင့် ပြန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မဟနလား … သွား ….
ဒီနေ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ရှိရာ သာဓုပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်ကို ရောက်တော့ လူတွေ ပြည့်နေပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး ပြည့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဦးကုသလရေ …. တပည့်တော်ကို အခုလို စိုးရိမ်ပေးတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ သံဃာတွေကို တပည့်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တပည့်တော်အလိုအရဆိုရင်တော့ ထောင်ထဲပဲ သွားတော့မယ်။ ဘယ်တော့မှ အညံ့မခံဘူး၊ အောက်မကျို့ဘူးလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် သံဃာတွေရဲ့ မျက်နှာ၊ သူတို့ရဲ့ ရှေ့ရေးကို ငဲ့ပြီး တပည့်တော် စာရေးနေတယ်”လို့ မိန့်ပါတယ်။ “ဆရာတော် …. ဆရာတော့်ဘက်မှာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ရှိပါတယ်။ (မဟန မပါ) သံဃာတွေက ဆရာတော့်ဘက်မှာ ရှိပါတယ်”လို့ပဲ ဆရာတော့်ကို လျှောက်ထားမိပါတယ်။
မဟနက ထုတ်ထားတဲ့ စာကိုတော့ စာဖတ်သူများ ဒီလင့်ကနေ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်… လိုင်းတွေမကောင်းလို့ ပုံတွေ တင်မရတာနဲ့ လင့်ပဲ ပေးလိုက်တယ်။
ရွှေည၀ါဆရာတော် စာသင်သား သံဃာအပါး ၁၀၀၀ ကျော်ကို စာသင်နေတာကို ရပ်ခိုင်းတာ၊ အနှောက်အယှက်ပေးတာဟာ ဓမ္မန္တရာယ်ဖြစ်၊ မဖြစ် လူငယ်စာသင်သားတွေတောင် သိနေကြပြီ။ ဒီ မဟနတွေကတော့ ….
မဟနရဲ့ ဒီသမိုင်းအမည်းစက်ကြီးကတော့ ဘာသာခြားတွေရှေ့မှာ ဘယ်လို မျက်နှာမျိုးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာတွေရဲ့ ရှေ့ဆောင်လို့ ပြောနိုင်တော့မလဲ …. ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးကို ကာကွယ်နေပါတယ်လို့ ပြောဖို့ဆိုရင် ဒီမဟနရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ကန့်လန့်ခံနေတော့မယ်။ အတော်ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒီလိုတွေ ပြောလို့ အင်းစိန်သွားရမယ်၊ အ၀ီစိသွားရမယ်ဆိုရင် ရှင်ကုတို့ ထိပ်ဆုံးတန်းက ပျော်ပျော်ကြီး သွားမယ် ….